လူတွေမသိကြသေးတဲ့ Game Of Thrones ရိုက်ကွင်းပေါ်က ဖြစ်ရပ်များ - For her Myanmar
GOT ပရိသတ် ယောင်းလေးတွေ ရှိရင် လက်ညှိုးထောင်!!!
ယောင်းတို့ရေ … Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ လက်ရှိမှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနဲ့ လူကြည့်အများဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီလိုရပ်တည်နိုင်အောင် ဇာတ်လမ်းကလည်း အကြမ်းကြီးကိုး … ဒါဆို ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ နောက်ကွယ်က ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို နည်းနည်းစီဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင် …
(၁) GOT ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Daenerys တစ်ဖြစ်လဲ Emilia Clarke ကတော့ Season 1 မှာပါတဲ့ မြင်းအသည်းစားတဲ့အခန်းမှာ သွေးအတုတွေပါးစပ်ထဲဝင်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
Daenerys (Mother of Dragons)
(၂) ဗီလိန် Ramsay နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ Iwan Rheon ဟာ Jon Snow နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ အစမ်းသရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ထိပ်ဆုံးနှစ်ယောက်ထိ ပါသွားသေးတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ Jon Snow နေရာကို လက်ရှိမင်းသား Kit Harington ရယူသွားပါတယ်။
(၃) Sansa Stark နဲ့သူ(မ)ရဲ့ဝံပုလွေလေး Lady က ဇာတ်လမ်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်သလို အပြင်မှာလည်း Sophie Turner နဲ့ Lady နေရာကပါဝင်ခဲ့တဲ့ ခွေးလေး Zunni က သံယောဇဉ်တွယ်သွားတာမို့ ခွေးလေးကို Sophie က မွေးစားထားခဲ့ပါတယ်။
Sansa Stark နဲ့ Lady
(၄) Margaery နေရာက သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Natalie Dormer က Spoiler မမိအောင်လို့ ဇာတ်ညွှန်းကို သူ(မ)ပါဝင်ရိုက်ကူးရမယ့် အခန်းတွေပဲ ကျော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဖန်တို့မည်သည် :P)
(၅) GOT ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ George R.R. Martin က ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှာ တစ်ခန်းစာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ဇာတ်လမ်းကို အစအဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့အခန်းကဖြတ်ချတဲ့ထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ် (စိတ်တောင်မကောင်းဘူးရယ် )
ကဲ … ဒါကတော့ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် GOT ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အကြောင်းတွေပါ။ Stella ကတော့ Mother Of Dragon ဇာတ်ကောင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ယောင်းတို့ရော?
GOT ပရိသတျ ယောငျးလေးတှေ ရှိရငျ လကျညှိုးထောငျ!!!
ယောငျးတို့ရေ … Game Of Thrones ဇာတျလမျးတှဲဟာ လကျရှိမှာ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးနဲ့ လူကွညျ့အမြားဆုံး ဇာတျလမျးတှဲအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ ဒီလိုရပျတညျနိုငျအောငျ ဇာတျလမျးကလညျး အကွမျးကွီးကိုး … ဒါဆို ဒီဇာတျလမျးတှဲရဲ့ နောကျကှယျက ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို နညျးနညျးစီဆှဲထုတျကွညျ့ရအောငျ …
(၁) GOT ရဲ့အဓိကဇာတျကောငျတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ Daenerys တဈဖွဈလဲ Emilia Clarke ကတော့ Season 1 မှာပါတဲ့ မွငျးအသညျးစားတဲ့အခနျးမှာ သှေးအတုတှပေါးစပျထဲဝငျပွီး နမေကောငျးဖွဈခဲ့ရပါတယျတဲ့။
(၂) ဗီလိနျ Ramsay နရောမှာ သရုပျဆောငျတဲ့ Iwan Rheon ဟာ Jon Snow နရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျဖို့ အစမျးသရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာ ထိပျဆုံးနှဈယောကျထိ ပါသှားသေးတယျဆိုပဲ။ ဒါပမေဲ့ Jon Snow နရောကို လကျရှိမငျးသား Kit Harington ရယူသှားပါတယျ။
(၃) Sansa Stark နဲ့သူ(မ)ရဲ့ဝံပုလှလေေး Lady က ဇာတျလမျးထဲမှာ သူငယျခငျြးကောငျးတှဖွေဈသလို အပွငျမှာလညျး Sophie Turner နဲ့ Lady နရောကပါဝငျခဲ့တဲ့ ခှေးလေး Zunni က သံယောဇဉျတှယျသှားတာမို့ ခှေးလေးကို Sophie က မှေးစားထားခဲ့ပါတယျ။
Sansa Stark နဲ့ Lady
(၄) Margaery နရောက သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Natalie Dormer က Spoiler မမိအောငျလို့ ဇာတျညှနျးကို သူ(မ)ပါဝငျရိုကျကူးရမယျ့ အခနျးတှပေဲ ကြျောဖတျခဲ့ပါတယျ။ (ဖနျတို့မညျသညျ :P)
(၅) GOT ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ George R.R. Martin က ဇာတျလမျးအစပိုငျးမှာ တဈခနျးစာ ပါဝငျရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သရုပျဆောငျအပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ ဇာတျလမျးကို အစအဆုံးပွနျရိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့အခနျးကဖွတျခတြဲ့ထဲ ပါသှားခဲ့ပါတယျ (စိတျတောငျမကောငျးဘူးရယျ )
ကဲ … ဒါကတော့ ပရိသတျတှမေသိသေးတဲ့ ကမ်ဘာကြျော GOT ဇာတျလမျးတှဲရဲ့ အကွောငျးတှပေါ။ Stella ကတော့ Mother Of Dragon ဇာတျကောငျကို အကွိုကျဆုံးပဲ။ ယောငျးတို့ရော?
Tags: game of thrones, GOT, HBO, series, winter is coming
ကိုရီးယားကားအသစ်တွေကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် “New KDrama Alert”